Iflethi Etofotofo Eyenzelwe Iingcali okanye Izibini - I-Airbnb
Iflethi Etofotofo Eyenzelwe Iingcali okanye Izibini
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKay
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ethe cwaka elungele iingcali ezisebenzayo nabantu abathandanayo abangathanda ikhaya elitofotofo kude nekhaya. Inayo yonke into onokuyidinga ukuze uhlale kamnandi ngomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, ikhitshi elipheleleyo kunye ne-TV. Indlela elula yokuya eChicago.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex inefenitshala epheleleyo kunye nayo yonke into onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho. Inebhedi enkulu etofotofo enekhitshi elinxibe kakuhle nendawo yokuhlamba iimpahla.
4.87 · Izimvo eziyi-92
Le ndawo ekumgama weemayile eziyi-35 ukusuka kumzantsi weLoop, ikhethekile kwaye intle kufutshane neendlela zendalo ezinobuhle bedolophu encinci, kodwa isasondele esixekweni, ikunika ezona ndawo zibhetele macala omabini.
Iflethi inendawo yokungena engenazitshixo ukuze ukwazi ukuzingenela, kodwa idityaniswe nendlu enkulu ngoko ndifumaneka ukuba kuyimfuneko. Ungaqhakamshelana nam imini nobusuku ngomyalezo okanye ngefowuni.